विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? एनसेलले ल्यायो आकर्षक अफर - Everest Dainik - News from Nepal
विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? एनसेलले ल्यायो आकर्षक अफर
काठमाडौंं, चैत्र ३१
नयाँ वर्ष २०७४ को अवसरमा जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले देश बाहिर गएको बेला फोन गर्दा आकर्षक छूट दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल बाहिर अर्थात् रोमिङ्मा रहेको बेलामा ग्राहकले आफ्ना परिवार, आफन्त तथा संम्बधित देशका व्यवसायिक साझेदारहरुसँग सुलभ दरमा सम्पर्कमा रहन सक्नेछन् । यो अफर यहि बिहीबार (चैत्र ३१) देखि लागु हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस एनसेलले ल्यायो ‘सही’ डेटा प्याक, दैनिक १ घण्टाको निःशुल्क भिडियो स्ट्रिमिङ बोनस
याे पनि पढ्नुस एनसेलविरुद्ध अनेरास्ववियुको प्रदर्शन
याे पनि पढ्नुस एनसेलले ‘योण्डर क्याराओके प्रतियोगिता’ आयोजना गर्ने